डा. केसीद्वारा स्वास्थ्य जाँच गर्न अस्वीकार, ९ किलो तौल घट्यो ::Nepali TV
You are here : Home News डा. केसीद्वारा स्वास्थ्य जाँच गर्न अस्वीकार, ९ किलो तौल घट्यो
डा. केसीद्वारा स्वास्थ्य जाँच गर्न अस्वीकार, ९ किलो तौल घट्यो
काठमाडौं । जुम्लामा १४ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर बन्दै गएको छ । आज उनको मुटुको चालमा त्यति बढी गडबडी नदेखिए पनि गति असामान्य रहेको र कोल्टे फर्कंदा वा हलचल गर्दामात्रै पनि मुटुको गति १०० भन्दा माथि पुग्ने गरेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । सामान्यतयाः स्वस्थ मानिसको मुटुको गति ७० देखि ८० को बीचमा रहन्छ ।
जुम्लाको चिसो मौसम र उच्च अल्टिट्युडका कारण नयाँ–नयाँ समस्याहरु देखिन थालेको चिकित्सकले बताएका छन् । दोस्रो–तेस्रो दिनदेखि रगतमा अक्सिजनको मात्रा घट्न थालेको थियो । आज पनि त्यसका कारण सास फेर्न गाह्रो हुने, बोल्दा सास बढ्ने, उठेर बस्न गाह्रो हुने आदि समस्या भएका कारण डा. केसीलाई निरन्तर कृत्रिम अक्सिजन नाकबाट दिइराखिएको उपचारमा संलग्न डा. प्रविन गिरीले बताए । रगत परीक्षण गर्न जाँदा डा. केसीले आजबाट कुनै पनि परीक्षण तथा उपचार नगर्नू भनेको डा. केसीलाई उद्धत गर्दै डा. गिरीले बताए ।
उनका अनुसार ब्रेनसम्म जाने रगतमा अक्सिजन र ग्लुकोजको मात्रा दिनानुदिन कम भएका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ । केही दिनसम्म यस्तै रगतको सञ्चार भइरहे डा. केसी बेहोस भई ठूलै समस्या आउन सक्ने उनले बताए । सुरुकै दिनबाट निरन्तर घटिरहेको सेतो रक्तकोषिकाको संख्या हिजोको रगतको रिपोर्टअनुसार ४ हजारभन्दा कम भइसकेको बताइएको छ ।
यसका कारण डा. केसी विभिन्न खाले संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । त्यसैगरी कमजोरी, चक्कर लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, मांसपेशी बाउँडिने र पिसाबमा केटोन बडी अत्यधिक देखिन थालेको छ । शरीरमा सञ्चित बोसोहरु पग्लेर मांसपेशी पनि टुक्रिन थालिसकेको बताइएको छ । यसैका कारण पहिलो दिनको तुलनामा डा. केसीको तौल ९ किलो घटिसकेको चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् ।
डा. केसीका भाइ किशोर केसीका अनुसार डा. गोविन्द केसीले तीन करोड नेपालीको हितका लागि लड्दै गर्दा मृत्युवरण गर्नुपरे पनि आफू तयार रहेको बताइरहेका छन् । सरकारले वार्ता गर्न नचाहेको र काठमाडौं आएपछि मात्रै वार्ता हुने बताउनु सरकारको झुक्याउने चाल रहेको केसीको भनाइ छ ।